Ra’iisul Wasaaraha oo kormeeray Dugsiga Tababarka Jen. Gordon ee horay Imaaraadka u maamulayeen | Sagal Radio Services
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa xerada kula hadlay Ciidan ka tirsan Guutada 14-ka October ee CDS oo uu Xeradaasi tababar ugu soconayay ayaa sheegay in Dal kasta oo burbur kasoo kabsanaya ay ciidankiisu yihiin kuwa bad-baadiya naftoodana u hura.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha oo ay wehliyeen wasiirrada difaaca iyo amniga, abaanduulaha Ciidanka iyo saraakiil kale oo ka tirsan Ciidanka xoogga dalka ayaa halkaasi Qado kula qaatay, isagoo xog warastay qaar kamid ah Askarta si uu wax badan uga ogaado noloshooda, tababarka ay qaadanayaan iyo sida ay heeganka ugu yihiin difaaca Dalka iyo la dagaalanka kooxaha nabad diidka ah.
“Dal burburay waxaa dhisi kara ciidan, nabad la waayay waxaa soo celi kara ciidan, dawlad taag daran waa quwad iyo xoog u yeeli kara ciidan. Cawdawga dibadda iyo gudaha laguma difaaci karo qabiil ee waxaa lagu difaaci karaa ciidan qaran oo idinka oo kale ah. Maanta dalkeenna waxaa bad-baadin kara ciidan aan daacad u aheyn qabiil, qolo iyo dan gaar ah”, ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre.